Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha oo Kulan deg-deg ah markale yeelanaya | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha oo Kulan deg-deg ah markale yeelanaya
Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha oo Kulan deg-deg ah markale yeelanaya
Muqdisho (Halqaran.com) – Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Axadda maanta ah markale lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan mid ka mid ah hoteelada ku yaalla Magaalada Muqdisho, iyaga oo kulankooda uga hadlaya arrimo dhowr ah.
Wararka ayaa sheegaya, in Kulankaan looga hadli doono waxyaabihii ka soo kordhay xaaladda wadanka, halka qaarkoodna ka warbixin doonaan kulamo kale oo gaar gaar ah oo ay la yesheen madax kale.
Waxyaabaha ugu adag ay musharraxiinta ka hadli doonaan ayaa waxaa kamid ah qaraxyadii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo jawaab la’aanka Villa Soomaaliya.
Ugu dambeyn, musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la kala diro guddiyada doorashooyinka Soomaaliya, sidoo kale uu xilka baneeyo Taliyaha NISA, hayeeshee Villa Soomaaliya weli aysan ka jawaabin codsiga musharixiinta.
Kulan degdeg ah
Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha